HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 22-OCT-2020
Thursday October 22, 2020 - 09:50:51 in Wararka by Mogadishu Times
Qabanqaabo loogu jiro in Guddiga doorashada 20/21 oo lagu dhowaaqo iyo wararkii u dambeeyey
DFS ayaa la filayaa inay saacadaha soo socdo ay si rasmi ah ugu dhowaaqdo liiska xubnaha gu ddiga farsamada ee ka shaqeynaya doorashada soo socota ee 2020 illaa 2021-ka.Dhismaha guddigan oo ay min 2 xubnood ku leeyihiin D/Goboleedyada ka ji ra dalka ayaa lagu waday in la soo dhowaaqo illaa 10-kii bishan oo Dorraad ku beegn eyd,balse ma suu ra-gelin ballantaasi oo lagu cadeeyey habraacii doora shada ee la soo saaray.
La-taliyaha arrimaha doorashooyinka R/ wasaar aha Soomaaliya oo lagu magacaabo, Cumar Ma xamed Cabdulle (Cumar Dhagey) oo la hadlay laan ta afka Soomaaliga ah ee BBC-da ayaa xusay in Shalay lasoo gaba-gabeynayo guddiga, ka dibna la gu dhowaaqayo.
Cumar Dhagey ayaa shaaciyey in maamul gobo leedyada qaar ay soo gudbiyeen liiska xubnaha ku metalaya guddiga farsamada iyo xalinta khilaafaad ka doorashada 2020/2021, isaga oo si gaar ah u ca rab baabay maamullada kala ah K/Galbeed & Jubb aland. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Shalay la sugayo maamullada kale ee Puntland, Galmudug iyo Hir-Shabelle.
"DG/yada K/Galbeed & Jubbaland ayaa soo gud biyay xubnaha Guddiyada ah ee laga sugayay si ay ugu shaqeeyaan arrimaha Doorashada iyada oo la raacayo shuruudaha ku xusan qofka kamid noqona ya xubnaha Guddiga” ayuu yiri la-taliyaha arrimaha doorashooyinka xafiiska R/ wasaare Rooble, Cumar Dhagey.
La-taliyaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday waxa sababay dib u dhaca ku yimid ku dhowaaqista guddiga oo Dorraad ku beegneyd, wuxuuna la xiriir iyey shuruudaha laga doonayo qofka ka mid noqon aya xubnaha ka shaqeynaya doorashada soo socda.
Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey "Dib u dhaca ko oban ma saameynayo Doorashada Dalka, waa ho wlo farsamo, maadaama habraaca ku xusan shuruu daha doorashada la raacayo, aan ka warsugno oo yaan saadaal xun ka bixin in waqtiga doorashadu dib uga dhaceyso xiliga lagu heshiiyay, balse rajo wan aagsan aynu muujino, waana aaminsanahay taas,”
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo 7adii bi shan uu warqad xusuusin ah RW/Rooble u diray dha mmaan madaxda DFS/DG/yada dalka, taas oo ku aa daneyd dhismaha guddigan iyo dardar-gelinta how laha doorashada ee 2020/2021.
Md.Salaad Cali Jeelle oo 10 sano kadib xil muhiim ah looga magacaabay DF
Siyaasiga Salaad Cali Jeelle, oo ka mid ah shaqs iyaadka aadka u taageera Madaxweynaha Soomaal iya Maxamed C/hi Farmaajo, ayaa si hoose loogu magacaabay safiirka DFSu fadhin doona dalka Jab uuti. Siyaasiga Salaad Cali Jeelle, ayaa rajo weyn ka qabay inuu kamid noqdo G/Wasii rada Soomaaliya ee uu dhawaan soo magacaabay R/Wasaare Ro oble, balse waxaa loo sheegay in la siin doono Safiir taas oo markii dambe looga dhabeeyay.
" Madaxweynaha ayaa ii gartay inaa noqdo Saf iirka Soomaaliya u fadhin doono dalka aan walaala ha nahay ee Jabuuti, waxaana ku muteystay dowlad jaceelkayga iyo shaqadii aan dalka usoo qabtay 4tii sano ee Madaxweyne Farmaajo,” ayuu yiri Salaad Cali Jeelle.
"Intii aan ahaa la-taliyaha Madaxweynaha iyo ka horba, si hagar la’aan ah ayaa ula shaqeeyay waxa ana laygu abaal guday in dalka ugu dhow Soomaal iya oo waligiis na garab taagnaa aan u matalo dowla dda,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ambassador Sala ad Cali Jeelle. Md.Salaad,waxa uu si indho la’aan ah u taage eray Madaxweynaha Soomaaliya Md. Farmaajo mudda uu xafiiska joogo, waxa uuna dagaalka ugu badan ku qaaday siyaasiinta ka soo jeeda beeshiisa iyo sidoo kale danaha beesha uu ka dhashay.
Dad badan ayaa taageerada Salaad ee Farmaajo iyo inuu kasoo horjeestay madaxweynayaashii hore oo ku qabiil ah ku macneeyey in Soomaaliya ay ka gudbeyso qabyaaladda, una gud beyso siyaasad ku dhisan dan iyo is xulufeysi.
Balse dadka qaar ayaa u arka in Salaad Cali Jeelle taageerada Madaxweynaha Soomaaliya ku waayay sumacadiisa, dadkiisa iyo in badan oo k amid ah dadkii taagee rsanaa kadib markii si indho la’aan ah Farmaajo ugu taageeray qaladaad badan.
Maamulka G/Banaadir oo ka shiray Amniga Caasimadda
Ku-simaha G/G/Banaadir ahna G/Ku-xigeenka Maa mulka iyo Maaliyadda Md.Axmed Xasan Iimaan ay aa shir gudoomiyay kulanka Degmooyinka G/ B/dir oo ah mid 7le ah, kaas oo looga had layay horumarinta Csimad . Kulanka ayaa looga hadlay arri maha amniga, Nadaafadda iyo horumarinta caasim adda. Iyadoo ay ka qeyb galeen G/yayaasha D/G/Ba naadir, qaar ka mid ah Agaasimeyaasha Gobolka iyo xubno kale.
Shirka oo ah mid 7dle ah ayaa la isku afgartay in la dar dargeliyo bilic soo celinta caasimadda iyo xoo jinta amniga.
Maamulka Somaliland oo oggolaaday in xabsiga laga sii daayo Bilaal Bulshaawi
Maamulka Somaliland ayaa sheegay in la sii dey nayo nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda K/ Soom aaliya oo dhowaan lagu xirey M/ Hargeysa. W/arrim aha gudaha Maamulka Somaliland Ma xamed Kaa hin Axmed ayaa sheegay inuu aqbalay codsiya da ah in la sii daa yo Bilaal Bulshaawi, oo ca an ka ah bar ta Tiktok, kaas oo ku xiran M/Harge y sa.
Qaar ka mid ah dad ka soo qeyb gal ay munaasab ad ka dhacday M/Harg eysa oo billad sharaf lagu guddoonsiina yay duuliye hore Axmed Maxamed Xa san (Axmed Dheere) oo la sheegay in uu diiday in diyaarad uu waday ay duqeyso Hargey sa sanadkii 1988, ayaa ugu baaqay dowladda Soma liland inay sii daayaan wiilkaas.
Wasiirka oo isagana munaasabadda ka hadlay ay aa sheegay inuu aqbalay codsiyada loo soo jeediy ay, ayna arrinta wiilkaas tallaabo ka qaadi doonaan.
Qoyska Bilaal Bulshawi ayaa hore waxa ay uga codsadeen Maamulka Somaliland in la sii daayo wiil kooda. Bilaal bulshaawi oo loo yaqaanno madaxw eynaha Tiktok ayaa bishii la soo dhaafay lagu xiray Hargeysa.
Booliiska ayaa sheegay in Bilaal loo xiray muuqa al uu iska soo duubay isaga oo shaah ku midabeys an calanka Soomaaliya ku cabaya maqaayad ku taa lla Hargeysa.
Md.Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Sababta Ka Hor Istaagtay In Dalka Uu Gaarsiiyo
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh.Maxamuud oo wareysi bixiyay ayaa waxaa uu ka ga hadlay waxa ka hor istaagay inuu dalka Soomaal iya gaarsiiyo inay ka dhacdo Doorasho qof iyo Cod ah.Xasan Sh. ayaa marka ho re sheegay in xiligii uu talada dalka qabanayay mu ddo yar ka hor Al-shabaab laga saaray qeybo ka mid ah dalka, isla markaana gudaha Muqdisho ay ka dha cayeen weeraro qaraxyo ah, lana qarxiyay hotel kii uu deganaa markii la doortay kadib, ayna dowl addi isa qaaday weeraro Al-shabaab looga xoreyay deeg aano dhowr ah.
Sababta dowladdiisa dalka u gaarsiinin Doora sho qof iyo Cod ah ayuu Xasan Sheekh ku sheegay inay tahay in waqti farabadan iyo Kharash ka qaa datay dhimasha afar maamul Goboleeed iyo Arrimo kale oo u baahnaa in dib uhabeyn ballaaran lagu sameeyo.Taliyaha ciidanka Uganda oo soo gabo ga beeyay socdaal uu ku tegay xarumo dhowr ah Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ay aa sheegay in caqabadaha hortaagan in dalka Soom aaliya lagu qabto Doorasho qof iyo Cod ah ay kamid ah tirakoob la’aan dadka ah oo jirta, looba baahan yahay in tirakoob la helo, si looga ogaado deegaan ada lagu kala badan yahay.
Md.Xasan Sh.ayaa Carabka ku dhuftay in muhiim ay tahay in markii dalka lagu qabanayo Doorasho qof & Cod si siman oo cadaalad ah ay ku dhacdo Do orashadaas, hayeeshee arrintaas ay ku imaan karto oo kaliya heshiis siyaasadeed oo la gaaro.
Ugu dambeyn Xasan Sh. ayaa sheegay in caqabado badan ay hor istaageen dowladdiisa, balse aysan sax aheyn in lagu qiimeeyo marxaladda hadda la joo go ee ay tahay in dib loogu laabto marxaladihii dalka ka jiray 2012-kii.
Si kastaba hadalka Xasan Sh.ayaa waxaa uu ku soo aadayaa, iyadoo haatan dalka ku jiro marxada kala ah, isla markaana la aaday Doorasho dadban oo ay heshiis ka gaareen Madaxda DFS DG/yada dalka iyo G/Banaadir
Xisbiga talada haya ee Somaliland oo xubno ku yeeshay xukuumada Somaliya
G/wasiiradda cusub ee XFS ayaa waxaa ka mid noqday xubno ka tirsanaa xisbiga Kulmiye ee haya talada maamulka Somaliland. Prof. Maxamed Cisma an Dubbe, oo ka mid ahaa xubnihii ud ub dhexaadka u ahaa ee diyaariyey ba rnaamij siyaasadeed ee xisbiga Kulmi ye ku galay doorashada madaxtinima da uu ku guuleystay Muuse Biixi biixi 2017, ayaa loo magacaabay W/warfaafinta Soomaa liya halka Cabddale Xaaji Cali oo isna xisbigaasi ka tirsanaa loo magacaabay wasaarada qorshaynta.
Arrintaani ayaa aad looga hadal hayaa M/Hargey sa maadaama xisbiga Kulmiye uu dhigiisa Waddani horay ugu eedayn jiray xiriir uu Somaaliya la leeya hay xubno ka mid ahna ay ku biireen DFS ayaa had da eedeyntaasi waji kale yeelatay.
Xubnaha cusub ee golaha wasiiradda ugu mid no qday Gobollada Waqooyi ayaa meesha ka saartay xubnihii dowladdihii kala duwanaa xilal wasiiro kasoo qaban jiray sida wasiir Maareeye oo seddaxdii dowl adood ahaa mas’uulaan dhicin.
Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Gen. Odawaa Yuusuf Raage ayaa faahfaahin ka bixiyay howlagalo ciidamada Militariga Soomaaliya ka same yeen deegaano ka tirsan degmada Diinsoor ee gobolka Baay.
Gen.Odawaa ayaa sheegay in ciidamada xooga dal ka howlgalo ay ka sameyeen meel u jirta D/ Diinsoor ilaa 11 KM ay ciidamada ku dileen ilaa 19 dag aalyahano ka tirsan Al-shabaab 2 ka mid ahna ay no losha kuhayaan sida uu WarbaahintaCQ sida uu u sheegay Gen. Odawaa Yuusuf Raage.
Taliye Odawaa ayaa intaasi ku daray in CXDS ay u suurta gashay iney burburiyaan fariisamahii Al-sha baab ku lahayeen nawaaxiga D/Diinsoor ee G/ Baay.XIGASHOSONNA.SO
Galmudug oo gacanta ku dhigtay nin ku eedeysan kufsi
Taliska booliska M/Cadaado ayaa qabtay eedeys ane Axmed Xusen Cabdi oo ku eedeysan kiis kufsi ah oo la sheegay inuu ka qeystay M/G/kacyo qeybta Puntland, isla markaana qaab baxsad ah ku tegay Cadaado.
Axmed Xusen Cabdi ayaa dib loogu celin donaa M/Gaalkacyo si kiiskiisa looga furo madaama uu halkaasi ka dhacay kiiska kufsiga ah ee lagu ede yn ayo. 2 Xidigle Cali Maxamed Xasan Taliyaha Bool iska M/Cadaado ayaa Warbahinta u shee gay in xiriir ay wada sameyeen booliska Galmudug ee Gaalk ac yo iyo Cadaado.
Nabaddoonka Cusub ee Beesha Barkaanle Duuliye oo loo doortay Nabadoo Siid Cali Macalin Maxamuud
Nabaddoonka Cusub ee Beesha Barkaanle Duul iye oo kamid ah Beelweynta Mataan Cabdulle Kana tirsan beelaha Galmaax Yoonis ee wacbuudhan ab gaal ayaa Shalay oo taarikhdu 21102020 tahay lagu Doortay M/Muqdisho Nabadoon Siid Cali Macalin Ma xamuud oo loo doortay in uu noqdo Nabadoonka ee beesha Barkaanle Duuliye ee Mataan Cabdulle.
Culuma udiinka Beesha Barkaanle Duuliye ee Mata an Cabdulle, Nabadoonada 3 graaf iyo 8 Hireey, Waxgaradka beesha, Ganacsatada dhalinyarada, Siyaasiyiinta oo iskugu yimid munaasabadda lagu do oranaayay Nabadoon Siid Cali Macalin Maxamuud ayaa hadalo Guubaabo dardaaran iyo garab istaag u muujiyey sidoo kale Culamada Beesha ayaa ayaga na halkaa dardaaran iyo ducoooyin halkaa ugu jeedi yey kulana dradaarmay inuu cadalada iyo nabadeen ta beesha dhaxdeeda kaga shaqeeyo.
Ugu danbee ntiina Nabadoon Siid Cali Macalin Maxamuud ayaa asagana u balan qaaday in uu bee sha Si cadaalad ah ugu dhax shaqeeyn doono Ha duu Alle idmo ayuu hadalkiisa ku soo gaba gabeey ey NABADOON Siid . Waxaa sidoo kale halkaa laga muujiyey lagana Balan qaaday In la soo ban bixin doono Beryaha Soo socdo Insha Allah
Doorka Culimada Beesha
1) Sheekh Ahmed Sheekh Abukar Moallim
2) Moallim Mohamed Isse Hadaafow
3) Moallim Ahmed Moallim Abshir Sheekh Hussein
4) Moallim Ali Omar Bulow
5) Moallim Mohamed Hussein Heyle
Doorka Nabadonada Dhaqanka
1) N: Elmi Hassan Mohamud
2) N: Farah Ali Hassan
3) N: Ali Ibrahim Ali
4) N: Hussein Nur Dagaabi
5) N: Abshir Hassan Farah ( Boqol)
6) N: Ali Nur Garabey ( Owali Garabey)
7) N: Nur Hassan Ali ( Nur Abas)
8) N: Hussein Muhumed Barrow
9) N: Nur Ali Mohamed Salah
10)N: Mohamed Musse Hussein
Mohamed Abshir Nur ( Kobqoray)
Ganacsade Xaaji Maxamed Cumar Yariis
Ganacsada Xaaji Ibrahim fooday
Ganacsada Maxmed Axmed Nur Gare
Gudoomiye Abshir Kaaran
Gudoomiye Ku xigeenka WaJoonkaay
Maxamed Xasan Cusmaan Xabeeb
Macalin Xasan Cilmi Jaqeey
Doorka Qurba Joogta
Cabdikariin Xuseen Maxamed
Maxamed Cali Baroow
Xildhibaannada Galmudug oo Ansixiyey Sharci ga Lagu Dhisayo Ciidanka Daraawi ishta
Xildhibaannada B/D/G/Galmudug oo Shalay kulan ku yeeshay xaruntooda M/Dhuusamareeb ee caa simadda u ah maamulkaas ayaa ansixiyey sharciga la gu dhisayo ciidanka dara awiishta, kaas oo horay ay u soo gudbisay W/amniga Gudaha Galmudug. Xildhibaannada soo xaadiray fa dhiga kulanka ayaa ahaa 51 Md,waxaa sharciga lo ogu codeeyey hab gacan taag ah, waxaana ogolaad ay 50 xildhibaan, halka uu ka aamusay 1 Md. majirin mid diiday meelmarinta sharciga. W/ Amniga G/G/Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sharcigaan Baarlamaanka horgeeyay isbuuc ka hor ayaa Xil dhibaannada golaha wakiillada uga mahad celiyay ansixinta Sharcigaan ay meel mariyeen. "W/Amniga Galmudug waxay u mahadcelinay saa G/B/Galmudug Dr.Maxamed Nuur Gacal, Guddi ga Amniga iyo Xuduudaha iyo X/B/G/Galmudug oo Shalay si aqlabiyad ah ku ansixiyey Sharciga dhisma ha C/B/Galmudug” ayaa lagu yiri war kasoo baxay wasaaradda amniga Galmudug.
Sidee loo dhacay 6 Milyan oo dollar oo loo gu deeqa DF ayada oo aan ka war-hayn?
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa lagu helay musuq-maasuqii ugu cuslaa ee xarumaha dow ladda, tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxwe yne Farmaajo, sida uu shaaciyey barnaamijka Galka Baarista ee idaacada VOA-da. Barnaamijka Galka Baarista ayaa shaaciyey in lacag ka badan lix milyan lagu lunsaday magaca wasaaradda caafimaadka, taasi oo ka timid deeq bixiyeyaasha caalamka ee sida gaar ah u taageera caafimaadka Soomaaliya
Lacagahaasi ayaa waxay si toos ah ugu dhaceen Akoono wasaarada looga furay bank-yo gaar loo lee yahay, midaasi oo fududeysay ku tagri-falka dhaqaal ahaasi badnaa.
Qaladka ugu weyn ayaa ka yimid ayada oo hay’ adaha deeqda bixiyey aysan lacagta soo marin qa snadda dowladda dhexe, balse ku shubay akoono ay wasaaradda sameysatay oo aanay cid kale ka war-hayn Waxaa maamulka lacagahaasi laga hagay ey xafiis qarsoodi ah oo ku yaalay degmada Waaberi ee M/Muqdisho, kaasi oo saraakiil sar-sare oo ka tirs an wasaaradda ay ku kala wadeen wax loogu yeeray ‘shaqooyin been abuur ah’.
Xafiiskaasi ayaa waxa uu Galka Baaristu ku tilma amay mid qeyb weyn ka qaatay musuqii wasaarada, isla markaana halkaasi lagu sameeyay jeegag iyo fool-jaro lagula baxay lacagtaasi, kuwaasi oo ay ku qornaayeen shirkado been abuur ah iyo kuwa jira oo aysan wax wada shaqeyn ah kala dhaxeyn wasaara dda.
Waxaana qeyb weyn ka qaatay xatooyada lacag ahaasi sida lagu sheegay barnaamijka xafiiska D/Waaberi ee wasaaradda, kaasi oo ahaa mid ka madax-banaan wasaaradda caafimaadka, balse lagu abaabuli jirey falalka musuq-maasuqa ah.
Dhaqaalahaasi oo ahaa 6.1 Milyan oo Doollar ay aa waxa uu ka yimid beesha caalamkam waxaana si gaar ah dowladda Soomaaliya ugu deeqay Hay’ada ha QM ee kala ah: Hay’adda UNPF, UNICEF iyo Ha y’adda World Vission.
1. United Nations Population Fund (UNFP) oo bixs ay: $3,400,000
2. Hay’adda Q/Mdioobay u qaabilsan Xanaananda Caruurta (UNICEF) oo bixisay $2,100,000
3. Hay’adda World Vision oo bixisay $575,000
Musuqa lacagahan oo la ogaaday inay soo taxn aayeen sanadihii u dambeeyay ayaa waxa loo aane ynaya inay horseeday hubin la’aan dhanka dowla dda ah, oo iyadu kal hore ku faantay inay dagaal xoo gan la gashay musuqa dalka.
Kooxo Hubaysan oo Habeenn hore M/Garoowe ku dilay Mas’uul ka tirsanaa Maamulka Puntland.
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dil Habeenn hore loo gaystay mas’uul ka tirsanaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo ku sugnaa bartamaha magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Dilka oo ay fuliyeen kooxo hube ys an ayaa waxaa loo geystay kaaliye ka tirsanaa max kamadda darajada koowaad ee Ciidamada Puntland.
Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray, Gar yaqaan Maxamed Maxamuud Cabdi oo ku magac dheeraa (Jaamuus), sida ay xaqiijiyeen dad goobjo ogayaal ah.
Wararka ayaa sheegaya in marxuumka toogasho lagu dilay, xilli uu ku sugnaa agagaarka hoyga uu ka dagan yahay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxihii ka dambeeyey falkaasi ay goobta isaga baxsadeen dhacdada kadib. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Garoowe oo gaaray meesha ayaa baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi, balse ma jiro weli wax faah faahin oo saraakiisha ciidamadu ay ka bixiyeen dilkaasi iyo howl-gallada daba socday intaba.
Garoowe ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca falal liddi ku ah amniga, waxaana muddooyinkii la soo dhaafay howl-gallo ka waday ciidamada ammaanka Puntland.
Dowladda Jabuuti oo xirtay xaduudaheeda & sababta oo la shaaciyay
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale xirtay xuddu udaheeda ka dib markii uu soo 2 kacleeyey fayraska Karoona oo maalmihii la soo dhafay kiisas badan laga diiwaan geliyey dalkaasi.
War ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jabu uti ayaa lagu sheegay in xadduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood ah, si loo xakameeyo faafitaanka fayraska.
Jabuuti waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee uu sida ba`an ugu faafay fayraska Karoona, hase ye eshee dadaal ay dowladdu sameysay ayaa lagu she egay inay yaraadeen kiisaska, muddooyinkii ugu da mbeeyay. Bilihii ugu dambeeyay xanuunka corona virus ayaa ka dabar go`ay dalkaas, sida ay shaa cis ay W/caafimaadka. Warbixintii ugu dambey say ee wasaaradda ayaa lagu sheegay inaysan jirin kiisas cusub, isla markaana dhammaan dadka uu ku dhac ay ay ka bogsadeen.
Balse Dorraad oo keliya ayay wasaaraddu shaac isay 30 kiis oo fayraska ah, balse faahfaahin kama bixin halka ay kiisaskaasi ka yimaadeen.
Waxaa jira dad u dhashay Jabuuti oo ku maqan dalka Itoobiya iyo Somaliland, kuwaas oo inta badan safar dhulka ay ku soo gala Jabu uti amaba kaga baxa, lama oga in lagu amri doono inay diyaarad soo raacaan iyo inkale. Dowlada ayaa ugu baaqday shac abka inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah, si loo xakameeyo cudurka.
Xubno ka mid noqonaya golaha deegaanka Gaalkacyo oo la doortay
Doorashada xubnaha golaha deegaanka dagm ada Gaalkacyo oo si rasmi ah loo daahfuray 12-ki bishaan ayaa waxaa Shalay lagu soo gaba-gabe eyay magaalada Gaalkacyo.Doorashada Shalay oo aheyd mid ku dhacday qaab qarsoodi ah ayaa lagu doortay 14 xubnood oo ku biiray 12 xubnood oo horay loo doortay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Axmed Xasan Cali ayaa sheekeeyay marxaladihii adkaa ee lasoo maray muddadii lagu guda jiray diyaarinta ergooyinka, wuxuuna sheegay 4 tii bilood ee uu socday diyaar garowga doorashada la muujiyay mas’uuliyad.
Wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Max amed Jaamac ayaa guul ku tilmaamay in la dha me ystiro golaha deegaanka Gaalkacyo, isagoo xubn aha golaha u rajeeyay in mas’uuliyadda loo doortay si wanaagsan uga soo baxaan.
Wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay xaafad ka tirsan M/Muqdisho
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa ku daagal amay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho sida ay sheegeen ilo wareedyo goobta ku sugnaa.
Xaafadda Buundooyinka ee ka tirsan dagmada Waa beri ayey muddo kooban is rasaaseyn ku dhe xmar tay 2 ciidan oo ka tirsan kuwa dowladda, wax aana halkaas ka dhashay khasare dhimasho